Monday January 18, 2021 - 22:44:48 in Wararka by Mogadishu Times
ByThe Heritage Institute for Policy Studies
Labaatan maalmood kayar ayuu dhammaanayaa muddo-xileedkii Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxda siyaasadda ee dalkuna weli iskuma afgaran hannaankii loo hirgelin lahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashada federaalka. Heshiiskaas taariikhiga ah, Dowladda Federaalka ee Soomaaliya (DFS) iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Federaalka (DXF) waxa ay isku af-garteen in la qabto doorasho dadban, oo ka dhacda laba xarumood oo dowlad goboleed kasta iyo Muqdisho ah, in 101 ergo ay codeeyaan, oo ay doortaan xildhibaanada aqalka hoose, iyo in baarlamaanada dowlad goboleedyadu ay doortaan xubnaha Aqalka Sare.
Haddaba, iyada oo la eegayo khatarta muuqata iyo sida muranku colaad afka ugu saaran yahay, waa daruuri in la helo dhex-dhexaadin caalami ah oo udhaxaysa labada dhinac. Bulshada caalamka oo ay horkacayaan Maraykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurub oo weliba adeegsanaya Golaha Ammaanka waa in ay culayska u badan saaraan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada/mucaaradka si ay u kulmaan maalmaha soo socda ayna dib uga istaagaan albaabka colaadda oo ay siyaasiyiinta Soomaalida garaacayaan. Labada dhinacna ma aysan kulmin ilaa 17-kii Sebtember oo ahayd markii Muqdisho lagu saxiixay heshiiska doorashada.
Sidee lagu yimid xaaladdan khatar ah?
Afartii sano oo la soo dhaafay, doorashooyin goboleed ayaa ka dhacay dhammaan shanta maamul-goboleed. Marka laga reebo Puntland, dhammaan doorashooyinkii kale waxay ahaayeen kuwo aan hufnayn, oo laboobay oo natiijadu ay ahayd mid la sii qorsheeyey. Dowladda federaalka ayaa siday rabtay u maamulatay doorashooyinkii Koofur-galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle iyada oo ujeeddadu ay ahayd in ay taageerayaasheeda kuraasta madaxnimada goboladaas ay ku fariisiyaan si ay madaxdaasi doorashooyinka heer federal guusha ugu salaxaan madaxda federaalka ee iyaga dhisay. Madaxweynaha hadda ee Jubaland isaguna doorashada gobolkaas isaga ayaa isa soo saaray dadkii la tartamayeyna suuragal uma ahayn in ay galaan doorasho ay si xor ah oo xalaal ah u tartami karaan. Doorashadaas kaddibna waxaa sii murgey khilaafka gobolka Gedo oo hadda noqday gobol Jubaland ka madax bannaan oo hoos taga Madaxweynaha dowladda Federaalka.
Doorashoonyinkii la musuq-maasuqay ee ka dhacay maamul goboleedyada ayaa u gogol-xaaray hufnaan la’aanta hannaanka doorasho ee heer fedaraal. Marka laga fiiriyo dhanacyo badan, doorashooyinkii afartii sano ee u dambaysay ka qabsoomay maamul goboleedyada intooda badan waxay dalka u diyaariyeen marxalad cakiran oo dhalin karta qarax siyaasadeed, xilli doorasheedka baarlamaanka soo socda iyo madaxwaynaha qaranka. Hoggaamiyeyaasha dawladda federaalka waxa ay filayeen in doorashooyinkii xoogga iyo muraadsiga ku dhisnayd ee maamul goboleedyada ay intooda badan ka soo saareen saaxiibadood in marka la gaaro doorashooyinka heer qaran in ay xaggooda awoodda u janjeerin doonto. Dhanka kale, mucaaradka ayaa aaaminsan in ay adag tahay qabashada doorasho xor iyo xalaal ah, maaddaama dawladda federaalku ay muquunisay haddana ay maamusho saddax maamul goboleed iyo magaala madaxda, Muqdisho.
Aragtidan kala kaan ka ah ayay ku salaysan tahay ismari-waaga siyaasadeed ee haatan taagan. Waxaa dhinacyada is haya ka go’an siduu midba midka kale u muquunin lahaa ama u minja xaabin la haa. Saadaashuse ma muujinayso jawi quruxsan oo ay Soomaliya ku xasili karto. Waxaa dhici kara in jaha la’aanta siyaasaddu ay dib u furfurto nabaddii iyo nidaamkii dawliga ahaa ee beesha caalamku ay labaatankii sano ee la soo dhaafay tidcaysay. Ilaa iyo markii ay dib u yagleeddii saddexaad ee qaranka Soomaaliyeed ka billaabatay Jabuuti sannadkii 2000, waxaa dalka ka qabsoomay afar doorasho oo heer qaran ah, kuwaas oo guud ahaan ay saamileyda siyaasaddu heshiis ku ahaayeen, walow ay jireen dhalliilo iyo khaladaad cadcad.
• Guddiga Doorashooyinka: Marka koowaad,waxaan soo jeedineynaa in mucaaradku ay si deg deg ah ugu gudbiyaan magacyada ay ku andacoonayaan in ay ka mid yihiin shaqaalaha rayidka, taageerayaasha aan dhex-dhexaadka ahayn iyo iyo saraakiisha amniga, xafiiska ergeyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay (SRSG), oo ah hayadda matasha beesha caalamka. Si uu ugala shaqeeyo DFS sidii loo beddeli lahaa xubnaha aan kalsoonida lagu qabin, iyadoo la raacayo heshiiskii 17-kii Sebtember-na isla markaana lagu beddelo xubno ka mid noqda guddiga doorashada kuwaas oo dhexdhexaad ah laguna kalsoonaan karo.
• Marka labaad,waxaan ku talineynaa in dhammaan dowlad goboleedyadu ay soo beddelaan xubnihii guddiyada doorashada ee heer federal iyo heer maamul goboleedkooda ee ay soo magacaabeen, ee xilalka ka haya maamulladooda ama aan kalsoonida lagu qabin.
• Tan seddexaad,waxaan u soo jeedineynaa DFS iyo dhammaan maamul goboleedyadu in ay u soo gudbiyaan Wakiilka Xoghaya Guud ee Qaramada Midoobay (SRSG) ciddii beddeli laheyd xubnahaas aan kalsoonida lagu qabin, si uu ugala shaqeeyo dhinacyada oo dhan si loo hubiyo in xubnaha guddiyada doorashooyinku ay yihiin kuwo ay isla wadar ogol yihiin dhammaan saamilayda.
Arrinka Somaliland:Waxa aan ku baaqaynaa in Guddoomiyaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Mudane Mahdi Gulled- oo ah labada masuul ee ugu sarreeya xubnaha Dowladda Federaalka ku matala Somaliland in ay si wada jir ah u soo magacaabaan guddiga maamulaya doorashada xildhibaannada ka soo jeeda Somaliland. Waxa aynu aaminsan nahay in labada dhinacba ay diyaar u yihiin inay ka mira dhaliyaan arrinkaas sidii ay muujiyeen intii ay socdeen wadahadaladii Garoowe
Waxaan soo jeedineynaa in dadaallo kala duwan oo wada socda la sameeyo, si xal loo gaaro
• Marka hore,waxaan ku talinaynaa in dib-u-heshiisiin laga dhex bilaabo dhinacyada isku khilaafsan Jubbaland iyo Hirshabeelle iyo sidoo kale in dib-u-heshiisiin laga dhex bilaabo beelaha isku khilaafsan ama kacdoonka ka wada goboladda Gedo iyo Hiiraan. Iyada oo la tixgelinayo cufnaanta ama baahsanaanta iyo is-shabahaadda caqabaadka ka taagan goboladaas, ayna si aan la kala saari karin ugu xiran yihiin doorashooyinkii goboladaas iyo awood qaybsiga dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Jubaland iyo weliba cabashooyinka qabaa’ilka qaar ee muddada dheer soo jiitamayey, waxaan soo jeedineynaa in Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay la shaqeyso labada dowlad-goboleed si loo bilaabo geeddi-socod dib-u-heshiisiin rasmi ah oo loogu talagalay in si nidaamsan wax looga qabto cabashooyinka ay tabanayaan qabaa’ilka qaar.
• Tan labaad,waxaan ku baaqaynaa in doorashooyinka labadaas gobol dib loo dhigo muddo kooban si dib-u-heshiisiin degdeg ah oo kooban looga bilaabo deegaanadaas, wadajirna looga shaqeeyo sidii ay ku guuleysan lahaayeen.
• Tan saddexaad,waxaan soo jeedinaynaa marka horumar laga sameeyo dib-uheshiisiinta deegaanadaas, in ciidamo dhexdhexaad ah oo ka socda AMISOM (oo aan ahayn kuwa ka soo jeeda Kenya iyo Itoobiya) in la geeyo gobol kasta si ay u sugaan amniga magaalooyinka iyo goobaha lagu qabanayo doorashada.
• Tan afraad,iyadoo la’ogyahay sida xaaladdu ay gacanta oga bixi karto mar kasta, waxaan soo jeedinaynaa in kooxda khubarada doorashooyinka ee Qaramada Midoobay loo xilsaaro abaabulka doorashooyinka gobolladaas iyagoo la kaashanaya hay’adda maamulka doorashada ee dowlad-goboleedyadaas.
Ugu dambeyn, waxa aan ugu baaqeynaa beesha caalamka, gaar ahaan Golaha Amaanka, in ay door muhiim ah ka ciyaaraan sidii looga baaqsan lahaa dagaal sokeeye. Danayn la’aanta xal u helidda xaaladda khatarta ah ee muuqata ayaa noqon karta hagrasho. Xaqiiqduna waxa ay tahay, inkasta oo la sameeyey horumar baaxad leh 20-kii sano ee la soo dhaafay, haddana, Soomaaliya waxa ay weli ku tiirsan tahay taageerada ay ku bixiyaan beesha caalamka sugida amniga iyo adeegyada aasaasiga ah. In ka badan kala bar miisaaniyadda dowlada dhexe iyo qaybo muhiim ah oo ka mid ah miisaaniyadda dowlad goboleedyada, waxaa bixiya deeq-bixiyayaasha caalamka. Waxaa intaa dheer, in-kabadan 20,000 oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM in ay ka taageeraan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada sugida amniga dalka. Sababtaas awgeed, beesha caalamka gaar ahaan Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay wuxuu leeyahay door muhiim ah iyo waliba waajibaad in uu dhexdhexaadin iyo dib-u-heshiisiin ka dhex sameeyo dhinacyada is haya marka ay xaaladdu u muuqato mid gacanta ka sii baxaysa oo aan la xakameyn karin.
Faalladan waxay kasoo baxday: Machadka Heritage ee Daraasaadka Siyaasadda